တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်သောအခါမျှ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမည် မဟုတ်ဟု ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား – MC Tv Club
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ခြားနိုင်ငံများအား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်ကျင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်းကို မည်သည့်အခါမျှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိသလို မည်သည့်အခါမျှလည်း လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ အထွေထွေဆွေးနွေးမှုသို့ ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ရှီက ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းမှု့ ၊ ချစ်ကြည်မှု့ နဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှု အမြင်တွေကို အမြဲတမ်း ဆုတ်ကိုင်ထား ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်” ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 21 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping said on Tuesday that China has never and will never invade or bully others, or seek hegemony.
Xi made the remarks in his statement delivered via video at the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly.
“The Chinese people have always celebrated and striven to pursue the vision of peace, amity and harmony,” he said. ■
Photo – Chinese President Xi Jinping addresses the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly via video, in Beijing, capital of China, Sept. 21, 2021. (Xinhua/Huang Jingwen)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ ပေကျင်းမြို့မှနေ၍ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတဆင့် တက်ရောက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများရဲ့ အွန်လိုင်းအရေးပေါ်အစည်းအဝေး မနက်ဖြန် ကျင်းပမည်ဟု အာဆီယံသံတမန်တစ်ဦးကပြောကြား
Previous Article ကမ္ဘာကြီးအား လှုပ်နှိုးလိုက်သည့် တွန် အင်ဒရူး၏ အစီရင်ခံစာ
Next Article အခက်အခဲတွေကြား CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် ချစ်သူစုံတွဲအကြောင်း